”In anigoo reer woqooyi ah aan RW ka noqdo Somalia waxaa lagu xirey hal shardi!” | Hadalsame Media
Home Madadaalada ”In anigoo reer woqooyi ah aan RW ka noqdo Somalia waxaa lagu...
”In anigoo reer woqooyi ah aan RW ka noqdo Somalia waxaa lagu xirey hal shardi!”
(Hadalsame) 08 Dis 2019 – Xalay bacda salaaddii subax waxan ku riyooday anniga Raysalwasaaraha Soomaaliya noqday, oo uu I soo magacaabay Xasan Cali Khayrahan iminka Raysalwasaaraha ka ah Soomaaliya oo madaxweyne ahi. Riyo waalanbay ahayd. Dhiciba maysee!
Waxan ka xasuustaa in shacabka Soomaaliya (Koonfurta) aad u soo dhaweeyeen uguna riyaaqeen In nin ka soo jeeda Soomaaliland (Waqooyi) Raysalwasaaraha noqdo, iyo Baarlamaanka iyo siyaasiyiinta oo aad ugu kala qaybsan. Ma xasuusto in aan oggolaanshaha iyo ansixinta Baarlamaanka helay iyo in kale.
Waxan se xasuustaa anniga oo salaad tujinaaya oo markii aan salaadii ka baxnay buuq iyo sawaxan bilaabmay,oo niman wadaaddo ahi leeyihiin“Salaadeenni ansax ma aha oo waxad na tujisay iyada oo madaxweynihii dalku misaajidka jooggo, isagaana xaq u leh inu jamaacada tujiyo maaddaama uu amiiralmu’miniinka isagu yahay”. In salaaddii lagu celiyay iyo in kale ma xasuusto.
Waxa kale oo aan xasuustaa in Xasan Cali Khayre igu yidhi “Afarta sanadood ee lay doortay waad ila dhammaysanaysaa, laakiin waxa shardi u ah in aad igala shaqayso In aan laba maamul goboleed ka dhisno Soomaaliland (Waqooyigii hore), oo Togdheer, Sool iyo Sanaag is raacinno; Saaxil, Maroodijeex iyo Awdalna is raacinno”.
Waxa kale oo aan xasuustaa in reer woqooyigu markay wax iga doonayaan aanay si toos ah iigu imaan ee ay ii soo maraan nin aanu ilmaadeer nahay oo Nuux la yidhaahdo.
Intaasi waa fikirkayga qofeedee, fasirada riyadan baan u baahnahay.
Waxaa ku riyooday: Maxamed Cali-ruush
Previous articleWAR CUSUB: Iiraan oo sheegtay inay Israel tijaabisey gantaalo iyada ku callaqan!
Next articleDAAWO: Baarlamanka oo muujiyay inuu doonayo waqti kororsi (Qodob aan la ogayn oo ay ansaxsadeen)